Akụkọ ifo nke Achilles na ikiri ụkwụ ya: nchịkọta dị mkpirikpi - UniProyecta
Akụkọ mgbe ochie na -ekwu na na Gris oge ochie enwere nnukwu dike nke ndị enyi ya niile nwere mmasị maka inwe obi ike na ike, onye ndị iro ya na -atụkwa egwu maka nka na usoro ọgụ ọgụ ziri ezi sitere n'aka chi ha. A kpọrọ ya Achilles ma na -anọchite anya otu n'ime ndị ama ama ama n'Ugwu Olympus. Ị chọrọ ịma akụkọ ifo ya?
Achọrọ m ịgwa gị ndụ ama ama nke onye ọgụ a na -atụ ụjọ ka ị mara oge kacha mkpa na ndụ ya. Ị ga -ahụ site n'ọmụmụ ya ruo ọnwụ ya. Ndị kedu ihe ọ bụ mmụọ ọjọọ na otu o si bụrụ anwụghị anwụ site na isi ya ruo na nkwonkwo ụkwụ ya, mana na -anwụ anwụ n'ụkwụ ya. N'ihi nke a akụ n'ime ikiri ụkwụ ya kpatara ọnwụ ya.
1 Kedu ndị nne na nna Achilles?
2 Kedu ka nwata Achilles si dị?
3 Agha Trojan
Kedu ndị nne na nna Achilles?
Achilles sitere na njikọ dị ịtụnanya, n'ime ya agwakọtara agwa abụọ: mmadụ na nke chi. Nna ya bụ Ana m alụ ọgụ, dike na -egbu egbu onye nwere nsọpụrụ ịlụ Thetis, chi nwanyị na -adịghị anwụ anwụ nke Olympus.
Ọ bụ nwanyị mara mma na -enweghị atụ, mara mma nke ukwuu na Zeus na Poseidon chọrọ ịhụnanya ya ogologo oge, mana ha mụtara ihe dị egwu, nke ga -etinye ike ha na Olympus n'ihe egwu, n'ihi nke a ha hapụrụ ịhụnanya ha nwere maka Thetis.
Gịnị bụ akụkọ ọjọọ a nke tụrụ gị egwu nke ukwuu? Otu ụbọchị, titan Prometheus nyere chi Zeus okwu, ihe a tụbara amụma na -atụghị anya ya. N'ebe ahụ ka ha hụrụ nke ahụ Thetis ga -amụ nwa nwoke dị ike, nwee ike ịchị nna ya ruo n'ókè nke iweghara ọchịchị ya.
Zeus na Poseidon ha tụrụ egwu nke ukwuu mgbe ha nụrụ akụkọ ọjọọ dị otu a, yabụ, ọ nweghị onye n'ime ha chọrọ ịbụ nna nke ajọ ihe ọjọọ a, yabụ na ha kwere ka chi nwanyị mara mma lụọ nwanyị na -anwụ anwụ.
Ụbọchị nnukwu agbamakwụkwọ nke Thetis na Peleus rutere. N'oge oriri ahụ, Eris, chi nwanyị nke esemokwu, kpalitere esemokwu n'etiti chi nwanyị Hera, Athena na Aphrodite; ịbụ mmalite nke ihe ga -emecha bụrụ njedebe nke Achilles.
Ndị ọbịa niile chọrọ ka ndị lụrụ di na nwunye ọhụrụ nwee ọ happinessụ nke ukwuu ka ha wee bie ndụ obi ụtọ mgbe ọ bụla, agbanyeghị, nke a emeghị otu a. N'oge na -adịghị anya nne ya Achilles mụrụ, chi mmiri, ọ laghachiri n'oké osimiri wee si otú a gbahapụ nwa ya na nna ya. Nke a kpatara nnukwu ihe mgbu nye mmadụ abụọ a bụ ndị hụrụ ya n'anya nke ukwuu ma na -atụkwa ya anya na ndụ ha niile.
Kedu ka nwata Achilles si dị?
Achilles, site na mgbe amụrụ ya, bụ nnukwu nwa nwoke, nwere nnukwu ume. Ọzọkwa, ọ dị oke ọsọ nke mere ejiri mara ya "obere ụkwụ”. O nwere agwa siri ike, gosipụtara oke agụụ maka ịbụ onye ama na akpịrị ịkpọ nkụ maka ime ihe ike megide mmadụ ibe ya. Akụkọ ndị a na -agwa na ọ bụ agwa a gbahapụrụ nne ya kpatara agwa a, eziokwu nke butere oke mwute n'obi ya.
O biri ndụ afọ mbụ ya na Phtia ya na nna ya Peleo. Nnukwu onye nkuzi ya bụ Phoenix onye kuziri ya ihe kacha mkpa maka nwata ọgbọ ya. Ekekọrịta ịhụnanya na ọbụbụenyi n'etiti ha. Fénix hụrụ ya n'anya dị ka a ga -asị na ọ bụ nwa ya, ọ na -elekọta ya mgbe niile ma nọnyere ya ruo mgbe ọ na -eto eto.
N'oge ọ bụ nwata ọ zutere Patroclus, otu nwa okorobịa so ya kerịta ahụmahụ ya niile. Ha mụtara nka nka ọgụ na ọzụzụ ndị ọzọ ga -eme ka ha bụrụ ndị isi ndị agha ma emechaa. Ha abụọ ghọrọ ezigbo enyi, na -anọkọ ọnụ maka ndụ ha niile.
Achilles mgbe ọ na -eto eto nna ya zitere ya Chiron, onye nkuzi ọhụrụ ya. Chiron bụ ọmarịcha centaur, nke dị iche na ndị ọzọ site na mmepeanya na oke mmụta na mpaghara ọgụ. Ọ bụ ya kụziiri nwa -nwoke onye isi usoro nchekwa na mwakpo n'oge agha, ọgwụ na ụdị nlanarị niile n'agha.
Nnukwu dike a, nwa nne chi nwanyị na nna na -anwụ anwụ, amụrụ ya na njiri mara ya dị iche na chi ndị ọzọ na ụmụ mmadụ ndị ọzọ, ọ bụ onye mmụọ ọjọọ. Echere m na, ọ bụghị anwụ anwụ kpamkpam, kedu ka nwoke pụrụ iche dịka Achilles nwere ike na -adịghị ike?
Akụkọ ahụ na -agwa nne ya tupu ọ pụọ, mikpuru ya n'ime mmiri nke ọdọ mmiri Styx iji nye ya anwụghị anwụ. Ka o jidere ya n'ụkwụ iji gbochie ya imikpu ma ọ bụ ebili mmiri eburu ya, ha enweghị mmiri, ha enwetaghịkwa mmetụta dị ike nke mmiri anwansi. Ya mere, Achilles nwere ike ịlanarị mmerụ ahụ ọ bụla mana ọ ga -anwụ n'ụkwụ ya, ya mere ahịrịokwu a ma ama: "Achilles n'ikiri ụkwụ”, Dị ka otu okwu maka adịghị ike.
Usoro dị iche iche kpalitere nnukwu ọgụ n'etiti ndị Gris na ndị Trojans a maara dị ka Agha Trojan. E buru amụma na agha a ruo ọtụtụ afọ ma maraworị na Achilles ga -anwụ n'ime ya. Thetis, nne ya ọ hụrụ n'anya, mara ọkwa dị egwu dị otu a, jiri mmiri anwansi saa ya ahụ iji nye ya anwụghị anwụ.
Mgbe ahụ ọ nwara izobe ya site na ndị agha n'etiti ụmụ nwanyị Eze Lycomedes, mana mbọ ya enweghị isi, n'ihi na Achilles chọpụtara n'onwe ya n'okpuru ọnwụnwa nke egwu ịkwọ ụgbọ, ọta na ube. N'ihi ya, ya na Ulysses gawara agha n'akụkụ ndị agha Gris.
N'oge agha a mara ya maka obi ọjọọ, o bibiri obodo dị iche iche, kwakọrọ ihe ọ hụrụ n'ụzọ ya. Ọ kụrụ egwu n'etiti ndị Trojans ebe ha maara na ha agaghị adị ndụ n'ihu ya. N'ọgbọ agha ndị a nnukwu enyi ya nwụnahụrụ ya, Patroclus, nke dugara ya igbu Hector wee were oke iwe na akpịrị ịkpọ nkụ maka ịbọ ọbọ lụọ ọgụ.
Ịnyịnya a na -enye ndị Trojans bụ ọnyà ịbanye n'obodo Troy. Achilles mgbe ọ na -agafe nnukwu mgbidi gara n'ihu na -emebi ihe niile n'ụzọ ya, n'agbanyeghị na ọ nwụkwara. Paris, nwa Eze Priam na nwanne Hector, nke chi nwanyị Aphrodite chebere, maara ka esi ebido ụbọchị na -aga nke ọma n'ikiri ụkwụ Achilles, na -akpata ọnwụ ngwa ngwa.
Obi abụọ adịghị ya na Achilles Ọ bụ otu n'ime ndị ama ama ama n'akụkọ ifo ndị Gris. Nsonye ya n'agha Troop nyere ndị Gris ohere imeri n'ọgụ mana nke a tufuru ndụ ya. Ọ bụ ihe atụ doro anya nke etu ọchịchọ ịbọ ọbọ, iwe na ọchịchọ ọjọọ si ebute ọnwụ dị egwu karịa dike.
Nke a bụ ya, anyị nwere olile anya na ọ masịrị gị ịgụ akụkọ ifo Achilles dịka anyị siri chọọ ịgwa gị ya. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara dike Achilles, ị nwere ike hapụ nkọwa n'okpuru.
Akụkọ ifo nke Hercules
Akụkọ ifo Pegasus
Inicio » omenala » Akụkọ ifo ndị Gris » Akụkọ ifo nke Achilles na ikiri ụkwụ ya